मोबाइल फोनको ऐतिहासिक लागत | Martech Zone
मङ्गलबार, डिसेम्बर 20, 2011 मङ्गलबार, डिसेम्बर 20, 2011 एडम सानो
जहिले पनि म यी मध्ये एक देख्छु को इतिहास लेखहरू वा इन्फोग्राफिक्स, म सँधै अलि ठूलो महसुस गर्छु। सत्य भन्न सकिन्छ, मोबाइल उद्योगमा यति लामो समयसम्म काम गरिसकेपछि, मैले यस फोनमा धेरै फोनहरू स्वामित्व लिएको छु!
जब मोबाइल फोन दशकौं अघि डेब्यु गरिएको थियो, यो एक उपकरण थियो जुन मुख्य रूपमा पुलिस, ट्याक्सी ड्राइभरहरू र ट्रकर्स, वा धनीमा धनी द्वारा प्रयोग गरिएको थियो। आज, सेल फोनहरू यति व्यापक छन् कि तपाईले पाँचवटा पाइला हिडन सक्नुहुन्न कुनै व्यक्ति कुरा गरिरहेको वा टेक्स्ट नगरी। अझ राम्रो, उपकरणहरूसँग अधिक क्षमताहरू र हिजोको फोनको मूल्यको एक अंशमा छ। बाट Savings.com इन्फोग्राफिक।
जबकि फोनको लागतहरुमा गिरावट आउन सक्छ (र त्यो महत्त्वपूर्ण छ किनभने कम्प्युटरहरू किन्न नसक्ने मान्छेहरूसँग अब इन्टरनेट, सामाजिक नेटवर्कहरू र एक अर्कासँग जडान छ), मलाई पक्का छैन कि मासिक योजनाहरू सबैमा गिरावट आएको छ। टेक्स्टिंग, डाटा प्याकेज र अतिरिक्त शुल्क र करहरूको अतिरिक्त लागतको साथ मूल्यमा!
एउटा कुरा जुन भरि सुसंगत छ र बढ्दै छ पाठ सन्देशको प्रयोग हो। अक्सर पुरानो टेक्नोलोजीको रूपमा खारेज गरियो, एक कम्पनीले हालसालै मलाई भन्यो कि यो उनीहरूको गोप्य हतियार थियो ... प्रदान गर्ने 8x रूपान्तरण दर अन्य मोबाइल र अनलाइन अभियानहरूको!